एमआरपी छैन? कुवेत नजानुस्
Wednesday, 20 June 2012 16:27	नागरिक
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, असार ६ -वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जाँदै हुनुहुन्छ? एमआरपी नभए नगएकै वेश। भारतीय र बंगलादेशीबाट नेपाली हस्तलिखित राहदानी दुरुपयोग बढेपछि कुवेत सरकारले यस्ता राहदानीबाहक धेरै नेपालीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिन थालेको छ। जाँदै गरेकालाई मात्र होइन, उतै बसिरहेकालाई समेत डेरा छापा मारेर हस्तलिखित राहदानी भेटिए डिपोर्ट (फिर्ता) गरिरहेको छ। १०/१५ वर्षदेखि ठूला कम्पनीमा वैधानिक रुपमै काम गरिरहेका केही नेपालीसमेत यही कारण फर्कनुपरेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
'नेपाली कामदारले कुवेती अध्यागमनमा कडा जाँच र हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। कतिपयलाई प्रवेश अनुमति नदिई नेपाल फिर्ता पठाइएको छ,' राजदूत मधुवन पौडेलले भने।
हस्तलिखित राहदानीमा कडाइ गरिएपछि दूतावासले कुवेत आउँदा वा फर्कंदा मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) लिएरमात्र यात्रा गर्न नेपालीलाई आग्रह गरेको छ। कुवेत सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तलिखित राहदानी प्रयोग नगर्न भनेपछि नेपाली दूतावासले 'एमआरपीमा मात्र यात्राको प्रयास गर्न' आग्रह गरेको हो।
'कडाइपछि बु‰दा घुमाउरो शैलीमा कुवेती अधिकारीले एमआरपी अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न भनेका छन्,' राजदूत पौडेलले भने, 'त्यसपछि हामीले यहाँ आउने सबैलाई एमआरपीमा मात्र आउन आग्रह गरेका छौं।'
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले हस्तलिखित राहदानी सन् २०१४ सम्म प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि कुवेत सरकारले भने 'हाम्रै नियम' र 'कारण भएरै' हस्तलिखित राहदानीमा गएका कामदारलाई फिर्ता गरिएको भन्ने जवाफ दिने गरेको छ।
राजदूत पौडेलका अनुसार क्राउन प्लाजा, अलघामी सुरक्षाजस्ता प्रसिद्ध कम्पनीमा काम गर्ने कामदारलाई पनि फिर्ता गरिएको छ। कम्पनीमा म्यानेजर पदमा कार्यरतलाई समेत फिर्ता पठाइएको उनले जनाए। एमआरपीमा जानेलाई भने कुनै समस्या नभएको पौडेलले जनाए।
ओभर स्टे (भिसा सकिएका) गरेकालाई डिपोर्ट गर्दा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) चाहिने हुँदा यस्तालाई फिर्ता गर्दा दूतावासलाई जानकारी दिने गरिन्छ। अन्यलाई भने कुनै जानकारी नदिई फिर्ता पठाउने गरेका छन्। त्यसैले हस्तलिखित राहदानी लिएका कतिलाई फिर्ता गरियो, संख्या यकिन हुन नसकेको दूतावासले जनायो।
दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुवेतबाट बिदामा घर फर्कनुअघि दूतावास आई नयाँ राहदानी (एमआरपी) बनाई यात्रा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। नयाँ राहदानीका लागि दूतावासमा निवेदन दिँदा आफू बिदामा जाने मितिभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअगाडि निवेदन दिन भनिएको छ।
अन्य देशका नागरिकले हस्तलिखित नेपाली राहदानी दुरुपयोग गर्दा नेपालीलाई समस्या परेको राजदूत पौडेल बताउँछन्। 'नेपालीको प्रतिष्ठा र राहदानीको विश्वसनीयतामै ह््रास आएकाले एमआरपीमात्र प्रयोग गर्न भनेका छौं,' पौडेलले भने।
कुवेतको अध्यागमन विभागले वैशाखको तेस्रो साता एकै दिन नेपाली राहदानीमा जाँदै गरेका ३६ बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। हालै मात्र दूतावासले पक्राउ गरी यस्तै तीन बंगलादेशीलाई कुवेत प्रहरीसमक्ष बुझाएको छ। कुवेती विधिविज्ञान प्रयोगशालामा नेपाली राहदानीमा गएका तर परिचय नखुलेका केही महिला कामदारको लास केही वर्षदेखि अलपत्र छ।
कुवेतमा ६२ हजार नेपाली कामदार छन्। घरेलु कामदार (हाउसमेड) करिब ३५ हजार महिलामध्ये ३० प्रतिशत नक्कली राहदानीमा कुवेत पुगेका हुन्।